“Eden Hazard ma bedeli karo Cristiano Ronaldo” – Arsene Wenger – Gool FM
Haaruun October 11, 2019
(Madrid) 11 Okt 2019. Tababaraha halyeyga ah ee Arsene Wenger ayaa soo jeediyey in Hazard uu yahay jawaabta kooxda Real Madrid, laakiin isagu uusan bedeli karin Cristiano Ronaldo.
Macallinkii hore ee Arsenal oo Hazard ku daawaday Chelsea ayaa warinaya in Kooxda Real Madrid aysan weli arag Eden Hazard-ka runta ah, laakiin xitaa marka uu sameeyo qaab ciyaareedkiisa ugu fiican uusan isagu weli bedeli karin booskii uu ka baxay Cristiano Ronaldo.
Hazard ayaa loo diiwaan geliyey goolkiisii ugu horreeyey ee horyaalka La Liga iyo caawintiisii ugu horreysayba kulankii ugu dambeeyey oo ay kooxdiisa Real Madrid ciyaartay ka hor ciyaaraha heerka caalami, kaasoo ay 4-2 uga adkaadeen Granada, taasoo ka dhigtay in kooxda macallin Zinedine Zidane ay saldhigato halka ugu sarreysa horyaalka Spain.
Sidaas oo ay tahay xiddiga xulka qaranka Belgium ee Hazard ayaan helin qaab ciyaareedkiisii cajiibka ahaa ee lagu yaqaanay xilligii uu joogay kooxda Chelsea.
“Isagu waa jawaabta Real Madrid, laakiin ma’ahan bedelka Ronaldo, taasi waa hubaal” ayuu Wenger u sheegay beIN Sports markii la weydiiyey wax ku saabsan Hazard.
“Isagu ma dhalin karo 50 gool sanadkii, maxaa yeelay taasi waa hadda sida ay u ciyaaraan kubada cagta.”
“Real Madrid waxay u baahan tahay gooldhaliye kale, maxaa yeelay Karim Benzema haatan waa 32-sano jir haddii ay haystaan qof ka yar oo dhaliya goolal, laga yaabee inay si wanaagsan wax u qaban karaan.”
Wenger ayaa sidoo kale sheegay in xiddiga reer Belgium uusan qofna ka baqin marka uu kubadda haysto, waxaana uu xusay in Real Madrid aysan weli arkin Hazard-ka dhabta ah.
Xiddiga xulka qaranka Talyaaniga iyo Tababarahooda oo bukaanno ku booqday Isbitaalka carruurta… + SAWIRRO